ukuhanjiswa kwegiya le-gearbox, ukulungiswa kwegiya le-helical gearbox
i-conveyor gearbox nokulungiswa kwegiya le-gearical
Ungayikhetha kanjani ibhokisi lamagiya elihlangabezana nesidingo sethu?
Ungabheka kukhathalogi yethu ukukhetha ibhokisi lamagiya noma singasiza ekukhetheni lapho unikeza imininingwane yezobuchwepheshe ye-torque edingekayo yokuphuma, isivinini sokuphuma kanye nepharamitha yezimoto njll.
Yiluphi ulwazi okufanele silunikeze ngaphambi kokufaka i-oda lokuthenga?
a) Uhlobo lwebhokisi lamagiya, isilinganiso, ukufakwa nohlobo lokukhipha, iflange yokufakelwa, isikhundla sokufaka, nemininingwane yemoto njll.
b) Umbala wezezindlu.
c) Ukuthenga kwenani.
d) Ezinye izidingo ezikhethekile.
Ungaligcina kanjani ibhokisi lamagiya?
Ngemuva kokuthi kusetshenziswe ibhokisi elisha lamagiya amasha cishe amahora angama-400 noma izinyanga ezi-3, ukuthambisa kufanele kuguqulwe. Ngemuva kwalokho, umjikelezo wokushintsha uwoyela cishe njalo ngamahora angama-4000; ngicela ungahlanganisi ukusebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zokugcoba. Kufanele igcine inani elanele lokugcotshwa ezindlini zegiya bese uyihlola njalo. Lapho kutholakala ukuthi i-lubrication yehlisiwe noma inani liyancipha, ukuthambisa kufanele kushintshwe noma kugcwaliswe ngesikhathi.
Yini okufanele siyenze lapho ibhokisi lamagiya lihlephuka?
Lapho u-gearbox usuphuka, ungazihlukanisi izingxenye kuqala. Sicela uxhumane nommeleli wokuthengisa ohlobene noMnyango wethu Wezohwebo Wangaphandle futhi unikeze imininingwane ekhonjiswe kupuleti legama, njengokucaciswa kwebhokisi lamagiya nenombolo ye-serial; isikhathi esisetshenzisiwe; uhlobo lwephutha kanye nobuningi bezinkinga. Ekugcineni thatha izinyathelo ezifanele.
a) Ukuvikelwa emvuleni, iqhwa, umswakama, uthuli nomthelela.
b) Beka amabhlogo wezinkuni noma enye into phakathi kwegiya nebhokisi.
c) Amayunithi egiya avulekile kodwa awasetshenziswanga kufanele afakwe kanye namafutha okulwa nokugqwala ebusweni bawo, bese abuyela esitsheni ngesikhathi.
d) Uma u-gearbox egcinwe iminyaka emi-2 noma isikhathi esithe xaxa, sicela uhlole inhlanzeko nokonakala komshini nokuthi ngabe ungqimba lwe-anti-rust lusekhona yini ngesikhathi sokuhlolwa njalo.
Yini okufanele siyenze lapho kwenzeka okungajwayelekile futhi ngisho nomsindo ngenkathi kugijima ibhokisi lamagiya?
Kubangelwa kahle yi-mesh engalingani phakathi kwamagiya noma ukubopha kulimele. Isixazululo esikhona kungenzeka ukubheka ukuthambisa kanye nokushintsha ukuthwala. Ngaphezu kwalokho, ungabuza futhi nommeli wethu wokuthengisa ukuthola izeluleko ezengeziwe.
Yini okufanele siyenze ngokuvuza kuka-oyela?
Qinisa izimbotshana phezulu kwebhokisi lamagiya bese uqaphela iyunithi. Uma u-oyela namanje uvuza, sicela uxhumane nommeleli wethu wokuthengisa eMnyangweni Wezangaphandle Wokuhweba.
Ngabe kusetshenziswa yiziphi izimboni amabhokisi wakho wamagiya?
Amakamelo ethu wegiya asetshenziswa kabanzi ezindaweni zezindwangu, ukucubungula ukudla, isiphuzo, imboni yamakhemikhali, i-escalator, imishini yokuzigcinela othomathikhi, i-metallurgy, i-togby, ukuvikelwa kwemvelo, izinto zokuhamba nokunye.
Sinabahlinzeki bezimoto abazinzile abebesebenzisana nathi isikhathi eside. Banganikeza ama-motors ngekhwalithi ephezulu.
Siyini isikhathi sakho sempi yomkhiqizo?
Sinikeza unyaka owodwa wempi selokhu usuku lokuhamba komkhumbi lushiye iChina.
Noma yimuphi umbuzo? Silandele !
Kuthengiswa imoto yeGear
Igiya le-Helical, i-Spiral bevel gear, gear Bevel, Bevel gear motor, Helical Gear Motors, Spiral Bevel Gear Motor
Ukuthungwa kwegiya lemoto ye-Helical worm
Igiya le-Helical, i-Worm gear, i-Worm gear motor, iHelical Gear Motors
Ama-gearbox wohlobo lwe-Flender
Igiya le-Helical, i-Bevel gear
Izinhlobo zezimoto zikagesi
Induction motor, i-AC Motor
Isivinini sokushintshanisa se-mehendi
Igiya le-Helical, i-Worm gear, i-Planetary gear, i-Planetary gear motor, i-cycloidal gear, Spiral Bevel Gear Motor, iWorm Gear Motors, iCycloidal Gear Motor
Izinhlobo zama-gearbox anezithombe
Igiya le-Helical, i-Spiral bevel gear, igiya le-Bevel
Inhlanganisela kagesi kagesi kanye neyegiya
Uhlobo lwe-Sumitomo cyclo
Ukwehlisa gearbox kagesi kagesi
I-Spiral bevel gear, igiya le-Bevel